Ogaden News Agency (ONA) – Faraca OYSU Mussawac oo Isugu Yimid Shirkoodii Sanadlaha Ahaa
Faraca OYSU Mussawac oo Isugu Yimid Shirkoodii Sanadlaha Ahaa
Posted by ONA Admin	/ February 11, 2015
Faraca OYSU Mussawac ayaa si heer sare u soo diyaariyay shir sanad la ah oo ka dhacay Magaalada Mussawac ayaa waxaa ka soo qayb gallay dhamaan Xubnaha OYSU, Maamulka Jaaliyada, Maamulka Ururka Haweenka Ogaadeeniya, Bahda Idaacada Codka Dadweynaha Somaliyeed (ICD Somaliyeed) iyo marti sharaf kale oo isugu jirta Masuuliyiin Jabhadeed iyo Umadda Somaliyeed ee ku dhaqan halkaa.
Ugu horay shirka ayaa waxaa furay xogyanta OYSU faraciisa magaalada mussawac, kadibna waxaa lagu soo dhaweeyey sheekh Bashiir Xaaji oo Wacdi diini ah oo qiimo badan Xubnihii ka soo qayb gallay u soo jeediyay. Sheekh ayaa si qoto dheer ugu hadlay baarinimada iyo u samafalida Waalidka khayrka ay leedahay If iyo Aakhiro iyo in ay
liibaanta Aduun iyo Aakhiraba ku jirto Raali galinta Waalidka.
Waxaa ka dib makarafoonka lagu soo dhaweeyay Axmed Maxamed oo si habsami leh u soo jeediyay Taariikhda Ururka Dhalinta Iyo ardayda Faraciisa Musasawac oo 11 sano guuradii ka soo wareegatay aas aaskii ururka dhalinyarada.
Waxaa Shirka qayb ka ahaa Kooxda Gurmad qaran iyo Barnaamiyo dhaxtaallo ahaa oo Ardayda Dugsiyada Sare iyo Dhexe ay si wadda jir ah shirka ugu soo bandhigayeen kuwaas isugu jiray sugaan halgameed kala ah Gabayo, Geraaro, Buraanbur, Dhaantooyin iyo Heeso.
Waxaa intaas ka dib lagu soo dhaeewayay Hogaanka Xuquuqul Insaanka OYSU Mussawac Halganto Hibo Macalin Cabdi oo shirka ku bandhigtay Xuquuqda qofkasta u mudanyahay ee xaqa ugu leeyahay iyo tacadiyada xadgudubka ku salaysan ee Gumaysiga Itoobiya u gaysanyo Shacabka biri-magaydada ah ee Ogaadeeniya.
Waxaa si diiran loogu soo dhaweeyay Amiin Deeq oo bayaanka sanad laha ahee OYSU Mussawac soo jeediyay ayaa hambalyo iyo bogaadin u diray Ciidanka Wadaniga Xoraynta Ogaadeeniya (CWXO), Mas,uuliyiinta JWXO, Jaaliyadaha Ogaadeeniya ee daafaha caalamka,dalada OYSU, Urur weynha Haweenka Ogaadeeniya waxaa ayna cambaareeyeen dhamaan falalka gumaysigu iyo gumaysi kalkaalku ku waxyeelaynayo Shacabka Ogaadeeniya.
Ugu danbayn waxaa ay ugu baqeen UNta iyo dhamaan hay,adaha caalamiga ah iyo kuwa dawliga in ay hoos u egaan dhibaatada iyo xadgudubka Itoobiya ka gaysanayso Ogaadeeniya. Waxaa kale oo shirka lagu soo bandhigay himilada iyo ujeedooyinka OYSU Mussawac oo ay soo bandhigtay Halganto Aamino Maxamuu oo dadkii ka soo qayb galay shirka aad ugu riyaaqeen.
Waxaa intaas ka dib makrafoonka sii heer sare ah loogu soo dhaweeyay Hogaanka Abaabulka iyo Arimaha bulshada ee OYSU Mussawc Axmed Cabdi Yusuf oo gudoonsiyay xubnaha sanadka shahaadooyin ay ku mutaysteen dadaalka iyo firfircoonida halgammeed ee ay ka gaysteen Jaaliyada iyo Faraca OYSU ee Mussawac.
Waxaa shirka ugu danbayn khudbabo qiimo badan oo isugu jira guulaha ay gaadheen CWXO ee jiida hore iyo xaalada qalafsan ee gumaysiga waqtigiisii dhamaad yahay ku soo xidhay shirka masuuliyiinta shirka ka soo qayb gashay.
Shirka ayaa ku soo gaba-gaboobay jawi farxad iyo rayn rayni ku dheehan tahay.